ဒီပို့စ်ကတော့ နည်းနည်း Personal ဆန်ပါလိမ့်မယ်။ သက္ကရာဇ် တစ်ခု ကနေ တစ်ခု ကို ကူးပြောင်းတဲ့ အခါသမယမှာ အချင်းချင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သ ကြတာ ဘယ်သူမှ လုပ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်မထားဘဲ လူတွေ လုပ်နေကြတဲ့ အလေ့အထလေး တစ်ခုပါ။ နှစ်ဟောင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့၊ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်နဲ့ မိမိ ယုံကြည်ရာ လမ်းကို အားကြိုးမာန်တက် လျှောက်လှမ်းဖို့ အတွက် အချင်းချင်း ဆုတောင်း ပဌနာပြုကြတဲ့ ကောင်းမွန်လှတဲ့ အလေ့အထလေး တစ်ခုပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ လက်ခံရရှိတဲ့ ဆုတောင်းလွှာလေး အမှတ်တရ အနေနဲ့ မှတ်တမ်းပြုထားခြင်းပါဗျာ။ မူရင်းစာသား အတိုင်းပဲ တစ်လုံးမချန် အတိအကျ ရေးကူးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
DEAR MY ENTIRE HOME MATE
FIRST OF ALL I WANT TO GREET ALL OF YOU HAPPY NEW YEAR 2009.
I WISH THAT WE CAN LIVE IN THIS COMMUNITY IN ONE INTEREST AND ONE OBLIGATION TO CONTRIBUTE OUR HOME AFFAIRS. EACH AND EVERY INDIVIDUAL IS RESPONSIBLE FOR OWN PERSONAL MATTER AS WE ALL ARE INTELLIGENCE MANKIND.
EVERYBODY MUST TRY TO SURVIVE FOR OUR OWN ASSURANCE AND PEACEFULNESS AND SO DO I.
MY NEW YEAR RESOLUTION IS “I WILL NOT CARRY ANYBODY’S BURDEN ON MY SHOULDER AND I AM NOT RESPONSIBLE FOR ANYONE AS WELL AS I WILL NOT IRRESPONSIBLE FOR MYSELF".
HAVE A WOUNDERFUL NEW YEAR!!!
မောင်လူအေး ဘလော့ကို လာရောက်လည်ပတ် ဖတ်ရှုကြသူများ အားလုံး… သက္ကရာဇ် ၂၀၀၉ မှာ သာယာ ချမ်းမြေ့မှု အပေါင်း ခညောင်းကြလို့၊ အောင်မြင်မှု အပေါင်းလည်း ရယူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုလူအေး
Here is my blog - www.wowfreaks.com
Here is my webpage: tktutor.com
Feel free to surf to my website :: cuyabro.com